Gallan oo ku baaqey xoojinta Amniga
10 Feb 10, 2013 - 7:31:33 AM
Xarunta mamulka Gobalka bari ayaa maanta 10 February,2013 lagu qabtey kulan balaaran oo looga hadlayay amniga iyo sidii garab loo siin lahaa ciidanka amniga gobalka Bari,waxana kasoo qayb galay mamulka gobalkan kan degmada,Isimo,Nabadoono,Culimada udiin,qaybaha kala duwan ee bulsahda rayidka iyo masuuliyiin xukumada ka socota.
Gudoomiyaha Gobalka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa sheegay Nabadgalyada Gobalka Bari inuu yahay mid lama taabtaan ah isla markasna aan cidna looga amar qaadan karin,wuxuna sidoo kale sheegay mamulka gobalka iyo laamaha amniga inay ka go'an tahay sugida amniga iyo horumarka shacabka bari.
Inta uu socday kulankaasi amniga looga hadlayay dhinacyadii kasoo qayb galay ayaa is dhaafsaday su'aalo ku aadan qaabka looga wada shaqayn karo amniga Gobalka Bari iyo sidii loo qancin lahaa dadka kasoo horjeeda nidaamka axsaabta badan,waxana ugu danbayntii go'aan lagu gaaray in si wada jir ah looga soo wada jeesta cid kasta oo amniga ka hortimaada.
Digniino kala duwan ayaa dhowaanahan ka soo baxayey Dowladda Puntland oo ku aadan inaan marnaba loo dul-qaadan doonin khalkhalinta amaanka gobolka Bari ,ilaa iyo hadana ma jirto cid sadaalin karta talaabada xigi doonta.
Halkan ka dhageyso Codka Gudoomiyaha Gobolka Bari Galla